Jose Mourinho oo doonaya inuu bixiyo £ 170m si uu u helao saxiixa Harry Kane
Tuesday, December 18th, 2018 - 22:57:16
Friday October 13, 2017 - 01:05:20 in Wararka by
Tababaraha Manchester United Jose Mourinho ayaa lagu soo waramayaa inuu diyaar u yahay inuu jabiyo rikoorka suuqa kala iibsiga ee Premier League, isagoo lacag dhan £ 170milyan oo uu ku doonayo weeraryahanka Tottenham Hotspur Harry Kane.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaa dhawaan qirtay inuu ku jiro qaab ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa noloshiisa ka dib markii uu dhaliyay 15 gool 10kii kulan ee ugu danbeysay ee uu u ciyaaray kooxda iyo wadankiisa.
Kane ayaa durbadiiba lala xiriirinayay inuu ku biiro Real Madrid dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaana laga yaabaa inuu arko xiddigihii hore ee kooxdiisa iminka Gareth Bale iyo Luka Modric oo ku soo laabanaya Waqooyiga London.
Sida laga soo xigtay jariiradda The Sun, Spurs ayaa haatan wajaheysa tartan dhinaca England gudihiisa iyadoo Man United ay diyaar u tahay inay lacag badan ku qarash gareyso weeraryahanka heerka caalami ee dalka Spain.
Warbixinta ayaa soo jeedineysa in Red Devils ay mushaar ahaan u siin doonto Kane 140 kun oo ginni hadii uu ogolaado kooxda United, isagoo markii hore 24 jirkaanlala xiriinaayay 2015
Wargeyska United ayaa laga soo xigtay : "Kooxda waxa ay ka codsatay Kane inuu soo laabto dhowr sano ka dib, waxaa loo sheegay in Spurs aysan jirin wax fursad ah, Jose waa taageere weyn, aad ayaana u xiiseynayaa saxiixa laacibkaan.
"Zlatan Ibrahimovic wuxuu u dhaqaaqi doonaa xagaaga soo aadan, waxaana uu ka sii dheeraan karaa inuu lacag kaash ah ku baxo qorshaha uu isticmaalo, dhibaatada United waa lacagta ay heli karto heerka xun xili dhow.
"Waxay noqon doontaa in ka badan lacagaha lagu iibsaday Kylian Mbappe, waa lacag ay gacmahooda ku qaban karaan, laakiin waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko waxa [Daniel] Levy ku adkeeystay wax walba oo uu noqon doono.in uu iibisyo xiddigiisa”
Guud ahaan, Kane wuxuu dhaliyay 84 gool 120 kulan oo Premier League ah oo uu u saftay Spurs tan iyo markii uu kulankiisii ​​ugu horeysay u saftay 2009kii.